इजरायल रोजगार – निर्माणका लागि नेपाली मजदुर लिँदै, कामदारको भिसा पाँच वर्षको हुने !
काठमाडौँ : इजरायलले नेपालीलाई निर्माण क्षेत्रमा पनि रोजगारी दिने भएको छ । नेपाल र इजरायल सरकारले नेपाली नागरिकलाई इजरायलमा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न पठाउने
द्विपक्षीय सम्झौताको तयारी गर्न संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेसँगै इजरायलमा रोजगारीको नयाँ क्षेत्र खुलेको हो ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र नेपालका लागि इजरायलका राजदूत हानान गोडर गोल्डबर्गरबीच बुधबार दिउँसो परराष्ट्र
मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि उक्त निर्णय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैबीच, केयर गिभर रोजगारीका लागि छनोट भएका ९९ जना नेपाली कामदार बुधबार राती इजरायलतर्फ उड्ने तयारीमा छन् । वैदेशिक १ सय २५ जनालाई उडाउने तयारी भएपनि २६ जनामा को’रोनाभाइ’रस
संक्रमण भएपछि ९९ जना मात्र जाने टुंगो लागेको विभागका निर्देशक डम्बरबहादुर सुनुवारले बताए । उनीहरू इजरायल पुगे पछि १४ दिन क्वा-रेन्टिनमा बसेपछि काममा जान पाउने बताइएको छ ।
दोस्रो चरणमा माघ १५ र १८ गते १ सय ६२ जना इजरायल जाने तय भएको विभागले जनाएको छ । इजरायलको केयर गिभरका लागि पहिलो चरणमा १ हजार १ सय ७५ जना छनौट गरिएकोमा हालसम्म ९ सय ९४ कामदारसँग सम्झौता
भइसकेको समेत विभागले जनाएको छ । विभागले इजरायल रोजगारीका लागि एक हजार ६ सय जनाको अन्तिम छनोट गरेको थियो । इजरायलमा विदेशी कामदारको भिसा अवधि पाँच वर्षको हुने भए पनि प्रत्येक वर्ष भिसा नवीकरण गर्नुपर्छ ।
२०७९ बैशाख २०, मंगलवार प्रकाशित 1 Minute 471 Views